--Lọ - Global ARCH
Global ARCH bu mmekorita nke ndi otu CHD / RHD site na gburugburu uwa Mụtakwuo Binye aka ugbu a Enwere m ikike ịnweta nyocha mbụ
Enwere m ikike ịgụ akwụkwọ
Enwere m ikike inweta ọgwụgwọ dị ọnụ ala
Enwere m ikike ịdị ndụ Nkwuwapụta ikike maka ndị nwere CHD na RHD
COVID-19 & ntụpọ obi pụta ụwa Ihe ị chọrọ ịma Mụtakwuo GLOBAL ARCH GLOBAL ARCH Ọgbakọ ndị ndu LIVE Soro webinars anyị
Njikọ aka anyị na-eme ka òtù dị iche iche si n'akụkụ ụwa niile na-amụ ihe, na-emekọ ihe ọnụ, ma na-ekwukọ ọnụ banyere mkpa na-enweghị isi nke ndị bi na ọnọdụ obi na-amalite na nwata.
Mụtakwuo banyere CHD na RHD na otu o si emetụta ndị mmadụ gburugburu ụwa, ma lelee nke anyị Global ARCH LIVE webinars na ọtụtụ isiokwu. Ọzọkwa, ị ga-ahụ ihe agụmakwụkwọ na njikọ bara uru - anyị na-agbakwunye mgbe niile.
Ọhụụ anyị bụ ibi n’ụwa ebe nwata ọ bụla nwere obi dị ike
Abụ m Belen Blanton, Onye isi oche nke Estrellita de Belen Foundation. A mụrụ m nwere nkwarụ obi a mụrụ na-akpọ tricuspid atresia na-eme ka m na-arịa ọrịa Eisenmenger ugbu a. Ugbu a, enyefere m ndụ m ọgụ maka ụmụaka nwere nkwarụ obi na mba m bụ Venezuela. Ọnọdụ dị na mba m nwere ihe karịrị 4,000
Ihere: iji amamihe na-ahọrọ okwu ga-eme ka ndụ dịrị gị mfe
N'iji ọnọdụ ahụ mgbe ikuku na-efe ma anyị na-eche n'echiche, otu mmetụta nke mmadụ na-arụ ọrụ site na mpụta. Ihere nke ọha mmadụ n'ụzọ ụfọdụ na-enye anyị nsogbu; na-eme ka anyị pụọ n’ụzọ nke anyị zubere. Ọ bụ ezie na ndụ jupụtara n'ụkọ, anyị ka kwenyere na anyị kacha mma n'ime mkpebi. Ileghara eziokwu ahụ anya
Nke a Congenital Heart Mmata Week (February 7-14) M "na-eme ememe" si m bed na a ogbe ndịda Toronto ọgwụ. Anọla m ebe a ọtụtụ oge n'ime ọnwa 11 gara aga, ebe ọ bụ na tupu anyị enwee mkpọchi mbụ COVID-19. Obi m, nke a na-akpọ tetralogy of Fallot, malitere ime ka obi m kụọ oke nke na ọ dị m ka m nwere
Global ARCH ndị na-edekọ akwụkwọ nkwenye na mgbanwe na nlekọta ọrịa obi ndị okenye
Global ARCH na-enwe obi ụtọ ịkpọsa na ọ kwadobela ma kwado akwụkwọ nkwekọrịta dị mkpa, nke e bipụtara na European Society of Cardiology's European Heart Journal. Isiokwu ahụ na-akọwa okwu na omume nke mgbanwe na nnyefe nke ndị nọ n'afọ iri na ụma nwere ọrịa obi. Global ARCH rụrụ ọrụ dị mkpa n'ịwe ndị otu na ịrịọ nzaghachi mgbe niile
Anyị nwere weebụsaịtị ọhụụ!
Anyị nwere ọhụụ ọhụụ, yana atụmatụ ọhụrụ ga - eme ka webụsaịtị anyị nwee ọrụ ọfụma ma rụọ ọrụ maka ndị na - ege anyị ntị n’ụwa niile. Ugbu a enwere ike ịtụgharị asụsụ ibe niile gaa n'ọtụtụ asụsụ dị iche iche site na iji ngwa ntụgharị asụsụ dị n'elu nke ibe ahụ (na kọmputa) ma ọ bụ n'okpuru ụkwụ na-eji ekwentị mkpanaaka
Anyị niile nwere ike inyere ndị otu nọ n'ụwa niile aka ime mgbanwe dị iche na ndụ ụmụaka na ndị okenye nwere CHD na RHD na ezinụlọ ha. Biko nye onyinye taa.
Nkwupụta Okwu Anyị
Anyị kwenyere na onye ọ bụla metụtara ọrịa obi-mmalite ọrịa obi nwere ikike ịnata ọrụ niile dị mkpa iji ruo ogo ha. Anyị na-arịọ ndị otu anyị na obodo CHD / RHD ka ha bịanye aka na Nkwupụta anyị.
Họchaa site na ụdị: All Enyemaka mmadụNdidi / EzinaụlọProfessional
Iyo site na mba: All ArgentinaAustraliaBelgiumBulgariaCanadaFijiFinlandGermanyIndiaIndonesiaIsraelItalyKenyaLebanonMalaysiaMexicoNamibiaNew ZealandPakistanPeruPhilippinesRwandaSouth AfricaSpainSwedenSwitzerlandUgandaUnited KingdomUnited StatesVenezuelaZimbabwe
Ọnụ ego nke AICCA Onlus
Omume maka ndị ọghọm
Okenye Congenital Heart Association
Obi Namibia Obi Obere
Obi Obere Obi South Africa
Obi Obere Obi Zimbabwe
Carelọ Ọrụ Nlekọta Obi Childmụaka n'okpuru National Institute for Woman and Child development
Heartmụaka Obi Association
Federationmụaka Obi Federation
'Smụaka Obi Foundation
Ọrịa Obi Congenital India
Ọgwụgwọ ụmụaka Fiji
European Congenital Disease Organisation
Tù Finnish maka Childrenmụaka Obi na Ndị okenye
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Fundacion Estrellita de Belen Corp.
Ego ndị Menudos Corazones
Surwa Ahụ Cardiac Global
Obi & Mkpọnwụ
Kidsmụaka obi New Zealand
Obi ndị dike nke Philippines Inc.
Obi jikọrọ ụwa ọnụ
International Society for Adult Congenital Obi Ọrịa
Kehilat HaLev (Obodo Obi)
Associationtù Ndị Ọrịa Na-ahụ Maka Kenya
Hapụ ya ikwughachi
Obere Obi Obodo
Foundation nke umuaka nke Pakistan
Pan African Netwọk nke Ọrịa Ụmụaka na Ọrịa Obi
Otu Nkwado RHD, Heartlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Obi nke Uganda
Ndị dọkịta na-awa ahụ
Otu Obi, Inc.
Themụaka Cardiac Foundation nke Africa
Ọnụ ego nke Mended Hearts, Inc.
Olu nke Obi
Jikọọ na netwọk ụwa nke CHD na òtù RHD ka anyị niile wee nwee ike ijikọ aka ọnụ iji melite ndụ ụmụaka na ndị okenye nwere ọrịa obi na-amalite na nwata.
Adịbeghị anya Tweets
Retweet na TwitterGlobal ARCH Weghachite
(25/75) Kedu ka ndị omebe iwu si etinye aka na #GlobalSurgery & 🫀 ọgwụ?
@surgfoundation na-enye ikpo okwu ọhụrụ maka usoro gburugburu ebe obibi niile iji ⬆️ enyemaka ịwa ahụ zuru ụwa ọnụ.
@worldheartfed jikọtara ọnụ #CVD 🌐 iji gboo ihe kpatara ọnwụ.
#WHA75 #Ịwa Ahụ́ Obi Ụwa
Nzaghachi na Twitter 1529067209804464133Retweet na Twitter 15290672098044641334Dị ka Twitter 15290672098044641338Twitter 1529067209804464133
(26/75) Kedu ka ọgbọ na-esote #GlobalCardiacSurgery si etinye aka?
@GlobalCardiac bụ netwọk zuru ụwa ọnụ nke ndị na-azụ ọzụzụ nwere mmasị na #CTSurgery, #GlobalSurgery, & #HealthEquity:
📢 Nkwado & webinars
🔍 Nchọpụta nyocha & ihe ngosi ọgbakọ
🌐 netwọkụ mmekọrịta & nkuzi
Nzaghachi na Twitter 1529072668753936386Retweet na Twitter 152907266875393638610Dị ka Twitter 152907266875393638613Twitter 1529072668753936386
(27/75) Kedu ka ụlọ ọrụ si arụ ọrụ na #GlobalSurgery?
@JNJGlobalHealth abụrụla onye siri ike na onye na-akwado olu #Surgery4All: https://www.jnj.com/global-public-health/global-surgery
@EdwardsLifesci na-akwado #GlobalCardiacSurgery site na @CTSurgeryFdn Onyinye obi ụtọ ọ bụla: https://thoracicsurgeryfoundation.org/awards/edwards/
Nzaghachi na Twitter 1529076045617438720Retweet na Twitter 15290760456174387203Dị ka Twitter 15290760456174387208Twitter 1529076045617438720